Company Profile - Ningbo Beilun Daqi Hongxiang Akuumbe Co. Ltd
boka redu unyanzvi vari kugadzira uye mukugadzira mhando dzose chakuvhuvhu & kufa-vachikanda chikamu & jekiseni epurasitiki chikamu. It kwapfuura ISO9001: 2015 dzakawanda unhu hurongwa authentication.
Hatina specialized zvakagadzirwa chikwata kupa pachake magadzirirwo uye zvose mabikirwo Data. Pane zvemberi mumhanyi simulation Software: JSCAST-VER13 kweJapan, Germany MAGMA, nokuti pokuongorora gating hurongwa design, uye CAE, Cam uye nyanzvi 2D / 3D magadzirirwo Software: CAD, UG uye Pro / E.
The yepamusoro midziyo: kumusoro-nokukurumidza CNC machine, CNC achiumba muchina, EDM, waya nokuveza muchina, kufa kusvibisa muchina (200T), lathe, kukuya muchina, CMM, purojekita, chakuvhuvhu zvinhu microstructure analyzer, zvinhu detector, zvakaoma bvunzo mudziyo, spectrograph, etc.
"Customer, Quality uye Kutendeseka pakutanga" ndiyo musimboti wedu.
"Advanced design, itsva mamiriro, mukuru nemazvo, unhu zvinhu, refu mupenyu, pfupi kukurukura nguva" vari chigadzirwa yedu zvinhu.
Tinogara chandagwinyira kuita zvose zvakanaka, chakuvhuvhu vamwe high quality, uye kuita zvatinogona kubatsira vatengi kuva mukwikwidzi pamisika nani, saka kune yakawiriranwa takunda zvisamumirira, nokusika uchenjeri pamwechete!
Chokwadi anofanira nekusimba kuburikidza dzavo maziso, anobvumirwa boka redu. Unotenda kuti zvinhu zvedu uye basa zviri kwikwidzana! Kana uchifarira matiri, ndapota havazezi uye kunzwa vakasununguka nesu.